प्रिय,जनप्रतिनिधिलाई सुझाव -Salyan Online
सल्यान अनलाइन, आषढ ०९, २०७६
फेरि अर्को अार्थिक वर्ष शुरु हुन लाग्यो । बजेट निर्माण, योजना छनौट र पूर्ववर्ती कामको गंभीर समिक्षामा रहनु भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई केही सुझाव -
१• मेरा कतिपय साथीले फोनमा भन्दै थिए, जनप्रतिनिधिले सुझाव मागेका छन् के दिने होला ? मागे जस्तो , माने जस्तो पनि गर्ने तर साँच्चै नगर्ने जनप्रतिनिधिको बारेमा एकजना मेरा कालिकोटका साथीले भन्दै थिए, "पानी र बुद्धि तलबाट सपारेर सप्रिदैन, यसको मुहानमै पुग्नुपर्छ"। जेहोस् अाफूलाई लागेका कुरा जनहितको लागि भएपनि बाँड्न चाहेको छु । अागे जे मर्जि होस् !
२• सबभन्दा पहिले- जनप्रतिनिधिले अाफू हिडिअाएको बाटोको निर्मम समिक्षा गर्नुपर्छ । कार्यकालको अाधा समयमा अाइसक्नुभएका तपाईंहरु अाफ्नो सकिदै गरेको समयावधिलाई मध्य नजर गर्दै बाँकी समयमा उत्कृष्ट काम गर्नुपर्नेछ । जसले अर्कोपटक तपाईंको अावश्यकतालाई अामजनताले महशुस गर्न सकुन् । चुनावमा जनताको भोट पाएर जित्नु र जितिसकेपछि जनताको मनमा बस्न सक्नु फरक कुरा हुन । जनताको भोट पाउन उम्मेदवारको योग्यता मात्र काफि हुँदैन, पार्टीको लोकप्रियता, कार्यकर्ताको सकृयता, सामाजिक अन्तर्विरोध र विरोधीको असक्षमताले प्रमुख प्रभाव पार्छ तर चुनावमा विजयी भइसकेपछि जनताको मन जित्न भने उम्मेदवारको क्षमता, योग्यता, इमानदारीता र विश्वास प्रमुख हुन्छ । अक्सर चुनाव जित्ने मान्छे जनताको मनमा खासै बसेका हुँदैनन् । राजनीतिज्ञले चुनाव जित्छ, जनताको मन जित्न त राजनीतिको क्षुद्र खेल भन्दा माथि उठ्नै पर्छ ।
३• दोस्रो कुरा- यो बेला शासन सत्तामा, कुर्सीमा, शक्तिमा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्ने प्रमुख कुरा हो - समय धेरै बदलिएको छ । अहिले हामी एक्काईसौँ शताब्दीको डिजटल युगमा छौँ । हरेकमा तिव्र फेरबदल भइरहेको छ । अाज जुन ठाउँको मान्छेले पनि सुचना संचारका विभिन्न माध्यमबाट संसारको कुनाकुना चहारिरहेको छ । मान्छेको बुझाइ प्रक्रियामा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराले छिटो प्रभाव पार्छ । तसर्थ, यो बेला मान्छेलाई, जनतालाई भड्काउने कुराको बाढी अाएको छ । र तपाईले यो संवेदनशील घडीमा जनताको जनप्रतिनिधि भएर नेतृत्व गर्नु परेको छ । हिजो तपाई जुन राजनीतिक परिवेशमा हुर्किनु भयो, जुन राजनीतिक अभ्यास गर्दै यो ठाउँसम्म अाइपुग्नु भयो, जे सिद्धान्त, दर्शन, वादले तपाईंको बुझाइलाई, राजनीतिलाई परिपक्व बनायो त्यो सबै कुरामा अहिले १८० डिग्रीको बदलाव अाएको छ । त्यसैले यो परिवर्तनलाई अात्मसात गरेर - जीवन भनेको सिक्दै सिक्दै गरिने यात्रा हो भन्ने बुझाइलाई अनुसरण गरेमा तपाईले काम पनि गर्न सक्नु हुन्छ, जनताको मनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ ।
४• नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक तीन तहको सरकार मध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय सरकारको नेतृत्व यतिबेला संयोगले तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ । नयाँ व्यवस्थाको नयाँ अभ्यासमा भएकोले तपाई गर्दै सिक्दै र सिक्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।अहिले तपाई एउटा राम्रो थिति, परम्परा, नियम र परिपाटी बसाल्ने भुमिकामा हुनुहुन्छ । प्रथम हुनुभनेकै अवसर र चुनौती दुवै हो । त्यसैले तपाईले सत्तासंचालनको फराकिलो घेरा बनाउनु पर्ने हुन्छ । जुन घेरामा तपाइले, चुनावताका अाफ्ना पराजित उम्मेदवारसँग, (जोसँग जनताको तपाईंकै हाराहारीको मत छ), विरोधीसँग, अालोचकसँग, अाफुलाई जिताउने पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकसँग समय दिएर, महत्त्व दिएर पटकपटक छलफल, विचारविमर्श, अन्तक्रिर्या, संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । अाफुसँगै निर्वाचित जुनसुकै तहको जनप्रतिनिधिसँग पनि हार्दिक, सम्मानित र सहकर्मीको व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतासँग जोडिने गरि, अाफ्नो स्वस्थ अालोचना र सुझाव, सल्लाह दिने, कार्यक्षेत्रको सिमा, समय, श्रोत, अावश्कता अनुसार गतिलो टिम हुनुपर्छ । चाहे त्यो किसान होस्, शिक्षक होस् , कर्मचारी होस् , खेलाडी होस् , व्यापारी होस् , युवा होस् , गृहणी होस् । जसले हरहमेशा यथार्थतावोध गराअोस् ।
५• यो बेला तपाई कुर्सीमा हुनुहुन्छ । सत्तामा, शक्तिमा भएको मान्छे अगाडि चिल्लो घस्ने अाममान्छेको प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसमा मख्ख नपर्नुहोस् । यदि तपाई जनताबाट, अाममान्छेबाट अाफू जस्तो छु उस्तै मूल्याङ्कन गरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने- सबैभन्दा पहिले तपाई पारदर्शी हुने, बन्ने अाँट गर्नैपर्छ । सत्तासँग विरोधी जन्माउने चरित्र किन हुन्छ ? त्यसको एउटै कारण हो - सत्ता रहस्यमय भइदिन्छ । त्यसको संचालक पनि अपारदर्शी भइदिन्छ । जब सत्ताका कामकारबाहीमा जनता परिचित हुँदैनन् त्यहाँ शंका जन्मिन्छ । तसर्थ - तपाईं अाफ्नो पालिकामा जनतासामु पारदर्शी बन्ने अाँट गर्नुहोस् । साहस जुटाउनु होस् । अाजसम्म तपाईंको पालिकामा जम्मा कति बजेट अायो ? के के मा अायो ? केमा, कहाँ , कसरी , कोबाट खर्च भयो ? अहिलेसम्म तपाईं जनप्रतिनिधिहरुले बुझेको तलबभत्तामा, गाडीमोटर इन्धनमा, खानानास्ता अावासमा , तामझामपूर्ण कार्यक्रममा, दैनिक, मासिक र वार्षिक हुने खर्चमा कहिल्यै जनताले बुझ्ने गरि देखाउनु भएको छ ? सुनाउनु भएको छ ? बुझाउनु भएको छ ? जनतासँग संवाद, अन्तक्रिर्या गर्नुभएको छ ? अाजसम्म यी शिर्षकहरुमा भएका खर्च जनतामा गएर अनुमोदन गराउनु भएको छ ? जनताको चर्को करबाट उठेको पैसामा उनिहरुलाई नै गुमराहमा राखेर, उनीहरुबाट अनुमोदन नगराएर यदि खर्च गरिरहनुभएको छ भने तपाईंलाई भ्रष्टाचारी नभनेर के भन्ने ?
जाबो एउटा पालिकाको नेतृत्वमा बसेर, केही हजार,लाख जनतामाझमा पारदर्शी बन्न अाँट नगर्ने तपाइँलाई के कति कारणले अागामी दिनमा तपाईंको राजनीतिक यात्रामा हामीले साथ दिने ? जनताले जिताउने ?
६• हाम्रो वरपरका अधिकांश जनप्रतिनिधिले बिना जोखिम सामान्य काम गरिरहेका छन् । कार्यकारी होइन कि, कामचलाउ जसरी । बाटाघाटामा बजेट छुट्याउनु, स्कुलहरुमा पैसा दिनु, खानेपानी, पुलपुलेसा, मठमन्दिर, पाटीपौवामा रकम दिनु, एनजीओ /अाइएनजिअो वालाका चिल्ला कुरा सुनेर साझेदारीमा कार्यक्रम चलाउनु , मिडियालाई पैसा दिएर समाचार लेखाउनु, लाखौं खर्च गरेर अाफ्ना नेताहरूलाई भाषण गर्ने मंच तयार पार्नु, अाफ्ना अासेपासे, चम्चेहुक्केहरुलाई पाल्नुपोस्नु बाहेक नयाँ, क्रमभंगतामा, अलि ठूलो स्केलको प्लानमा जनस्तरबाट योजना बनाएको देखिदैन । अाफू अाउनु अगाडि शिक्षाको, विकासका पूर्वाधारको, जनताको- स्वास्थ्यको, रोजगारीको, भौगलिकको, संस्कृतिको, पहुँचको, न्यायको, अवसरको अवस्था कस्तो थियो र मेरो कार्यकालमा यहाँ सम्म पुर्याउँछु भनी स्पष्ट भिजनका साथ जोखिम मोलेर काम भएको देखिदैन । हिजो कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकाय र अाज जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकारमा खासै भिन्नता देखिदैन । हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै उस्तै हो नानू भन्ने विज्ञापन जस्तैको हालतमा छ । योबेला जनप्रतिनिधि अाफैले अाफैलाई ढाँट्न जरुरी छैन । बरु निर्ममताका साथ अाफैलाई सोध्नुस् - अाजसम्म कृषिमा छुट्टयाइएको लाखौंको बजेटले किन किसानलाई छोएन ? हामीले अात्मनिर्भरताको लागि महिला, दलित, युवा, सिमान्तकृत जातिजनजातिमा छुट्टयाइएको लाखौंलाख बजेटले किन केही असर गरेन ? बर्खे च्याउसरी कमाउन खोलिएका संस्थाले गर्नेकाम बाट किन मान्छे सन्तुष्ट हुने ? जनताको करोडौं पैसा किन खर्च नगर्नु पर्ने शिर्षकमा खर्च भइरहेको छ ? किन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको तालमेल मिलेको छैन ? समस्या कहाँ छन् ? अन्तर्विरोध कहाँ छ ? पहिला किटानी गर्नुहोस् अनि हलदिने विधि र प्रक्रिया बनाउनु होस् । तसर्थ - यो बेला अाफै अग्नीपरिक्षामा होमिनोस् । साँच्चै - राजनीतिमा अर्काको विरोध गरि गरि नेता बन्नु र गर्नेठाउँमा गएर जनताको समर्थन हासिल गर्नु कति फरक रहेछ ? भिन्नता महशुस गर्नुहोस् ।
७• अन्तमा- अाजसम्म मैले जतिपनि, जहाँका पनि जनप्रतिनिधि भेटेको छु, कमैलाई मात्र अाफ्नो काममा, जिम्मेवारीमा उत्साहित भएको पाएको छु । अधिकांश अाफैदेखि थाकेका, निराश निराश भएका, जेमा पनि वाक्कदिक्क भएजस्ता, कुण्ठैकुण्ठाले भरिएका, षड्यन्त्रै षड्यन्त्रले पिल्सिएका, शंकैशंकाको पसल थापेका, अरुबाट केवल प्रशंसै प्रसंशा सुन्न मुख अाँ गराइरहेका जनप्रतिनिधि बग्रेल्ती भेटिन्छन् । तसर्थ - जनप्रतिनिधिले पहिला अाफैलाई उत्साहित गराउनुपर्यो । हरेक दिन नयाँ काम, नयाँ योजना , नयाँ सपना, नयाँ प्रतिबद्धता र नयाँ कल्पनामा हिडाउन, दौडाउन पर्यो । जनतालाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिमा हुनुहुन्छ - यो तपाईंको दौड ५००/१००० मिटर/किलोमिटरको दौड होइन जसलाई छोटै समयमा पार गरेर सुस्ताउन पाइयोस् । राजनीतिको रिङ भित्र रहदासम्म हरबखत चनाखो र तयारी हालतमा हुनुपर्यो, जसमा तपाईंले बाँचुन्जेल मात्र होइन मृत्युपर्यन्त पटकपटक जनताको, मान्छेको बिचमा परिक्षणमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ । संसारमा थुप्रै त्यस्ता राजनीतिज्ञ छन् जसको जीवनीबाट, मृत्युपर्यन्त उनको चर्चा/परिचर्चा, बदनामी र अालोचनाबाट धेरै प्रेरणा , ज्ञान लिन सकिन्छ ।
प्रिय, जनप्रतिनिधि ! तपाईंको अागामि यात्रा सुखद अनि सफल बनोस् शुभकामना